Aluminum CNC Machining, qiray Machining - Anebon
CNC axdi qarameedka Service
Adeegga ridaya Die
Sheet been Birta
Qaybo ka CNC Machining
Waxaan fahamsanahay muhiimada ay u babac dhigaya status quo oo si joogto ah u riixaya xuduudaha waxa suurto gal ah. Waxaan ka shaqaynaa in dulqaadka sida dhagan sida ± per 100mm of aragti 0.01 inkastoo dulqaadka adag waa u suurtoobaan xad xasilloon, fasalka xoojiyeen qalabka injineerinka. Sax CNC qaybo machined la dhisi kara in ay macaamiisha caadadii tilmaamay wax.
Die Qaybo Casting
5 dhidibka Machining
Sax jeestay Kooban
CNC jeestay Part
CNC jeestay, dhuumaalaysiga Qaybo
Ridaya Die Farsamada Qaybo
shubay Die Qaybo Phone
Best Qaybo Birta Gurdanka
Fast jediyay Qaybo
Birta jediyay Part
Birta jediyay Qaybo
Anebon waxaa la aasaasay sannadkii 2010. kooxda Our waxaa ku takhasusay design, wax soo saarka iyo iibinta warshadaha hardware ah. Waxaana ku maray ISO 9001: 2015 shahaado.
Waxaan leenahay sare, hufan oo sare mashiinada caadiga ah ka Japan, oo ay ku jiraan kala duwan axdi qarameedka CNC iyo mashiinada jeestay, Furimaha Dagaalka dusha, Furimaha Dagaalka gudaha iyo inta banka Caraabaah, Wedmls, Wedmhs ECT. Oo annaguna waxaannu sidoo kale qalabka baaritaanka sare ugu. Qaybo la dulqaadka ilaa 0.002mm ± noqon kartaa mid taageero.
Our History Industries Customer Reviews our Advantage
PERCISION, waxqabadka, iyo isku halaynta
Booqo Our Macaamiisha ee Germany
Macaamiisha ka Europe booqday Anebon
Cinwaanka: Rongtong Industrial Park,
dhiman ridaya qaybo , aluminium shubay, dhinta aluminium qaybo loo shubay , aluminium shubay dhinta , qaybo ka ridaya , kabka dhinta aluminium ,